STAYC မှအတိတ်အလားအလာရှိသည့်အုပ်စုအမည်များကိုဖော်ပြသည် ကိုရီးယား၏ဆိုးလ်
STAYC သည်အဖွဲ့ ၀ င်ခြောက် ဦး ပါသောမိန်းကလေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် High Up Entertainment မှစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ပထမဆုံးသီချင်းဖြစ်သည့်“ စတားရန်လူငယ်ယဉ်ကျေးမှု” သည်သူတို့၏အုပ်စုနာမည်နောက်တွင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
ထုတ်လုပ်သူ Black Eyed Pilseung သည်ဤမိန်းကလေးအဖွဲ့၏နောက်ကွယ်ရှိ ဦး နှောက်ဖြစ်ပြီး K-Pop သီချင်းများပါ ၀ င်သည့်လူသိများသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ TWICE ၏“ TT”, SISTAR ၏“ Lonely” နှင့်များစွာသောအရာများဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက Hyosung ၏အိပ်မက်ရေဒီယိုနှင့်ပတ်သက်သောရေဒီယိုအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်မိန်းကလေးများကဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီအား၎င်းတို့ရှာဖွေနေသည့်စွမ်းရည်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများရှိသည့်အသင်း ၀ င်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်သုံးနှစ်ကြာမည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါမိန်းကလေးများရလဒ်ခဲ့ကြသည်။ ပြတယ်!
ကုမ္ပဏီသည်အတိတ်ကအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်အခြားအနာဂတ်အရှုပ်တော်ပုံများကိုအာရုံစူးစိုက်မှုမရှိသောလျှောက်ထားသူများအတွက်လုံ့လဝီရိယနှင့်မဆုပ်မနစ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ သူတို့သည်အနာဂတ်ပြissuesနာများမရှိဘဲ K-Pop ရုပ်ပုံများဖြစ်လာနိုင်သောမိန်းကလေးငယ်များကိုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်လိုလားခဲ့သည်။
ရှယ်ယာမှာအလွန်အကျွံရှိခဲ့သည် ကုမ္ပဏီသည်မည်သည့်အချိန်မဖြုန်းတီးပါစေနှင့်၊ သူတို့၏အမည်ကိုပွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်သည့်အုပ်စုတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဒါ့အပြင်အုပ်စုနာမည်ကိုလည်းဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုတာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။
အွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အင်တာနက်သုံးသူများသည် STAYC မတိုင်မီကုမ္ပဏီ၏စာရင်းတွင်ဖြစ်နိုင်သည့်အမည်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။ အောက်မှာကြည့်ပါ။
MOLAR ရဲ့နောက်ကွယ်ကအဓိပ္ပာယ်ကသူတို့လိုချင်တာပဲ "K-Pop ကိုသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့အတူဝါးစားပါ။ "
- 앙고 (@ ango1sa) နိုဝင်ဘာလ 22, 2020
STAYC မှမိန်းကလေးများအစားနာမည်ကောင်းများကိုတွေ့ခဲ့ရသည့်အခါ Netizens နှင့်ပရိသတ်များသည်အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။ ပရိသတ်များသည်ပျော်ရွှင်မှုရှိပြီးကျေနပ်နေသောမိန်းကလေးအုပ်စုများဖြစ်သော STAYC ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ အောက်ကသူတို့ရဲ့ဂီတဗီဒီယိုထွက်စစ်ဆေးပါ!
STAYC မှမိန်းကလေးများသည် ၄ ​​င်းတို့အဖွဲ့၏နာမည်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ငါမိန်းကလေးအုပ်စုတစ်စုကိုဖန်တီးမိန်းကလေးများလေ့ကျင့်ရေးခက်ခဲသောဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ်။ အုပ်စု၏အမည်သည် ၄ ​​င်းတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောကိုရီးယား Youtuber ကသူမရဲ့ဝင်ငွေကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဖော်ပြသည်
နောက်တစ်ခုကိုရီးယားတွင်ရှာဖွေခဲ့သည့်ရှာဖွေမှုအများဆုံးပြဇာတ် ၁၀ ခု၊ ၂၀၂၀၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်